News - Shuruudaha dayactirka agabka saxda ah ee mashiinka qodista
Mashiinka qodista qodistu waa qayb saldhig farsamo, oo baahi weyn leh. Badanaa, biinanka, biinanka, ribbooyinka, iwm, si loo hubiyo nabadgelyada ama uma baahna inay tixgeliyaan saameynta heerkulka, jawiga xun ama xaaladaha kale ee shaqada ee khatarta ah. Waxyaabaha caanka ah waa birta kaarboonku ka samaysan yihiin, bir-bir hooseeya iyo biraha aan bir-goosnayn Laakiin waqtiyada qaaska ah, qalabka xawaaraha wuxuu u baahan yahay inuu buuxiyo shuruudaha daxalka daran ama xoogga sare, waxaa jira biro badan oo aan fiicnayn iyo bir aad u sarreeya oo bir aad u sarreeya ayaa soo baxay. Lixdan soosocda ee soosocda waa in fiiro gaar ah la siiyaa markii la isticmaalayo iyo dayactirka fiiloyinka qodista dabada:
1. Geedi socodka maydhaya xadhkaha qodista dabada waa mid deg deg ah loona baahan yahay in aad looga taxadaro. Inta hawshu socoto, waxaa jiri doona hadhaa dusha sare ee siligga tolida qoditaanka. Tallaabadani waa in la maydho ka dib marka nadiifiyeha silicate ah la maydho.
2. Inta lagu gudajiro socodka duulaanka, furmada waa in la mideeyaa, haddii kale qashin yar ayaa ku dhici doona saliidda dabka ka baxaya.
3. Hadhaaga fosfooraska cad ayaa ka soo muuqan doona dusha sare ee xoqadaha xoogga badan, taasoo muujineysa (barta 1) in kormeeruhu uusan taxaddar ku filan sameynin inta uu shaqeynayo. 4. ifafaafka madow ee dusha sare ee qaybaha waxay soo saartaa dalabka kiimikada, taas oo muujineysa in kuleylka daaweynta aan si wanaagsan loo sameynin isla markaana haraaga alkaline-ka dusha sare gebi ahaanba aan laga saarin.
5. Qaybaha caadiga ahi way ku mirkan doonaan markay maydhayaan, oo biyaha loo isticmaalo maydhashada waa in had iyo jeer la beddelaa.
6. Burbur xad dhaaf ah ayaa muujinaya in saliidaha demiyuhu muddo aad u dheer la isticmaali jiray, loona baahan yahay in lagu daro ama lagu beddelo.